प्रेमीले अस्पतालमा हेर्न आउँछु भनेपछि बि’रामी युवतीले गरिन् ‘हेभी मेकअप’- त्यसपछी खुल्यो यस्तो आनौठो र’हस्य, अस्पतालमा सबै चकित ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/प्रेमीले अस्पतालमा हेर्न आउँछु भनेपछि बि’रामी युवतीले गरिन् ‘हेभी मेकअप’- त्यसपछी खुल्यो यस्तो आनौठो र’हस्य, अस्पतालमा सबै चकित !
प्रेमीले अस्पतालमा हेर्न आउँछु भनेपछि बि’रामी युवतीले गरिन् ‘हेभी मेकअप’- त्यसपछी खुल्यो यस्तो आनौठो र’हस्य, अस्पतालमा सबै चकित !
एजेन्सी / यदि तपाईं अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई कुनै चो’ट लागेको हुनसक्ने वा बि’रामी भएको हुनसक्ने संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई भेट्न आउने कोही पनि व्यक्तिले तपाईंलाई उत्कृष्ट देख्ने आशा राखेका हुँदैनन् । यद्यपि, भियतनामकी एक युवतीले भने अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि प्रेमीले उनलाई मेकअप बिना नदेखुन् भनेर हतारहतार मेकअप गरेकी छिन् ।
चाइना प्रेसका अनुसार वाङ्गमेइ अस्पतालमा प्रेमी भेट्न आउने खबर सुनेर यति उत्साहित भइन् कि उनले फेसबुकमा निकै खुसी हुँदै क्याप्सन लेखिन्, ‘मेरा प्रेमी मलाई भेट्न आउँदैछन् !’प्रेमीले आफूलाई क’मजोर नदेखोस् भन्ने उद्देश्यले उनले तत्काल बेस मेकअप, आइब्रो, ब्लसर, आई स्याडो, आई लाइनर लगाइन् साथै झुम्कासहित नङमा पालिससमेत लगाइन् ।
रेस्पिरेटर राखिएको उनको अनुहारमा मेकअप निकै उत्कृष्ट देखिएको थियो तर यस्तो अवस्थामा पनि हेभी मेकअप गरेको भन्दै धेरैले उनको आ’लोचना गरे । उनले आफू सुन्दर छु भनेर देखाउन यतिसम्म पनि गर्न नपर्ने धेरैले बताएका छन् । उनको झुम्कामाथि पनि धेरैले प्रतिक्रिया दिँदै मानिसहरुले उनलाई बि’रामीजस्तो नदेखिएको बताएका छन् ।
कतिले भने प्रेमीले चि’न्ता लिने हुन् कि भनेर वाङ्मेयीले यस्तो गरेको हुनसक्ने बताउँदै उनको समर्थन पनि गरेका छन् ।
चिसोले गर्दा हात खुट्टाको जोर्नी, घुँडा दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् मिल्नेछ राहत
दैलेखमा देखियो आश्चर्य, बाँसको झाङ राति आफै झलमल, स्थानीय चकित !
आफ्नी क्या*न्स*र प्रेमिकालाई अस्पतालमै विवाह गरे यी प्रेमीले, तर विवाह भएको केही घण्टामा नै प्रेमीकाले छाडिन् संसार